Tantara - Runchen Industry Co., Ltd.
Runjin dia nankatoavin'i Unilever ho mpamatsy manerantany. Tonga amin'ny tsenan'izy ireo Indonezia, Filipina, Aostralia, Afrika Atsimo ny orinasanay. Ary mitazona fironana mihamitombo hatrany izahay eo amin'ny sehatry ny fandraharahana. Ity dia dingana lehibe iray amin'ny faneken'ny mpanjifa tsena.
Runchen dia nanangana biraon'ny sampana tao an-tanànan'i Taizhou mitondra ny lohateny hoe Taizhou Runjin Machinary Co., Ltd. Runjin Machinary Co., Ltd dia manana orinasa 4000m2, mpiasa 60 ao anatin'izany ireo teknisianina 15 izay tena matihanina sy za-draharaha amin'ny sehatry ny milina.
Runchen dia nikaroka sy namorona karazan-jiro gilasy mahomby be, izay efa eken'ny mpanjifa maro ary nanjary nalaza eran'izao tontolo izao.
Nanangana mpanjifa amin'ny tsena Chili, Aostralia, Dubai, Mexico, Azia atsimo atsinanana izahay. Mba hamenoana ireo fepetra takiana amin'ny indostrian'ny sakafo dia nametraka fenitra iraisam-pirenena avo momba ny fitaovantsika izahay. Ny singa elektrika rehetra sy ny kojakoja rehetra ao aminy dia mifanaraka amin'ny marika fanta-daza, toa an'i Siemens, Bonfiglioli, Schneider, sns.
Taorian'ny taona maro niainan'ny tsena anatiny sy ny fifandraisana azo itokisana kokoa dia nanomboka nanaparitaka orinasa manerantany i Renchen.
Ny fampidirana ny fivoarana vaovao Ice cream formula dia mamotika ny karazana nentim-paharazana ary mahatratra zava-bita mahafinaritra amin'ny 2002.
Runchen dia naorina tamin'ny 2001.